Thierry Henry Oo Guul-darro Ku Aftaxay Waayihiisa Tababarenimo - Cadalool.com
Thierry Henry Oo Guul-darro Ku Aftaxay Waayihiisa Tababarenimo
Tababaraha ku cusub saaxadda macallinimada ee Thierry Henry ayaa guul-darro ku bilaabay shaqadiisa cusub ee uu ka bilaabay kooxda kubadda cagta Monaco, taas oo 2-1 ay ku khaarajisay kooxda yar ee Strasbourg kulan ka tirsanaa horyaalka Faransiiska Ligue 1.
Thierry Henry oo ay da’diisu tahay 41 sano jir ayaa madaxa qabsaday markii laga gaadhsiiyey laba gool daqiiqadihii 17aad iiyo 84aad, ka hor intii aanay Monaco gool rikoodhe ah la imanin.
Ciyaartan oo kaadhka cas laga siiyey Monaco laacibka Samuel Grandsir qaybtii labaad ayaa waxay rajada kusii xumaysay Monaco oo tobankii ciyaarood ee ugu dambeeyey lix dhibcood oo kaliya ka heshay, ka hor intii aan la caydhinin tababarihii hore.
Henry oo toddobaadkii hore loo magacaabay tababaraha Monaco oo beddelay Leonardo Jardim oo 11 ciyaarood oo tartamada oo dhan ah laga badiyey xili ciyaareedkan bilowga ah, ayaa waxa uu garoonka kusoo galay shax uu filayey inuu guushiisii ugu horreysay kulankiisa koowaad ku heli karo, hase yeeshee Strasbourg ayaa 2-1 kaga adkaatay.
Monaco waxay kaalinta ugu hoosaysa horyaalka ku wada jiraan Guingamp oo ay wada haystaan min lix dhibcood, hase yeeshee dhinaca goolasha ayay ku sarraysaa Monaco.
Kooxda uu Henry maamulo ee Monaco oo sannadkii 2017 ku guuleysatay horyaalka Ligue 1, ayaa waxa lagaga kala kaxaystay ciyaartooyadeedii waaweynaa badankoodii, waxaanay taasi ku ridday hoos u dhac weyn oo ay la loollami kari weyday naadiyadii kale, iyadoo laga cabsanayo inay hoos ugu dhacdo heerka labaad.
Natiijooyinkan liita ee ay keentay kulamadan ayaa ah kuwii ugu xumaa tan iyo sannadkii 1953-kii oo sidan oo kale ay horyaalka ku bilowday.